Fact Check – စာမျက်နှာ3– Nyang Media
Fact Checkနိုဝင်ဘာ 02, 2020
အခုပြောပြလိုတာကတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မုံရွာအောင်ရှင် ပြောတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သည်သတင်းကို Phyo Phyo Phyo အမည်ရတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင် က နိုဝင်ဘာလ(၁) ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သည်သတင်းကို ရွှေဘိုမြို့ရဲ့ ရင်ဖွင့်ရာ၊...
Fact Checkနိုဝင်ဘာ 01, 2020
သည်တစ်ခါ ပြောပြလိုတာကတော့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သည်ဓာတ်ပုံမှာ ဒါရိုက်တာ/သရုပ်ဆောင် ကိုပေါက်အပါအဝင် အခြားနာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား တွေ လည်း ပါဝင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ သည်ဓာတ်ပုံထဲမှာ...
အခုပြောပြလိုတာကတော့ NLD မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြန့်ချိထားတဲ့ သတင်းအမှား တစ်ပုဒ်အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သည်သတင်းအမှားကို သီဟ အမည်ရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် ကနေ ဖြန့်ချိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည် သတင်းကို ထပ်ဆင့် ဖြန့်ချိသူ၊ မှတ်ချက်ပေးသူ...
Fact Checkအောက်တိုဘာ 21, 2020
အခု ပြောပြလိုတာကတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ သတင်းအမှား တစ်ပုဒ်အကြောင်းပါ။ သည်သတင်းအမှားကို Ko Ko Davies လို့ အမည်ရတဲ့ အကောင့် ကနေ We Love NLD...
ထိုင်း နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းအမှားဖြန့်ချိနေမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အခု ပြောပြလိုတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ခတ်မှု အခြေအနေတွေ အပေါ်မှာ အကြောင်းခံပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဖြန့်ချိနေကြတဲ့ သတင်းအမှား...
Fact Checkအောက်တိုဘာ 20, 2020
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမား တွေရဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို အသုံးပြုပြီး အများပြည်သူထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ သတင်းအတု၊ သတင်းအမှားတွေ ကို ဖြန့်ချိနေမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ နီးလာတာနဲ့အမျှ သည် သတင်းအတု၊ သတင်းအမှား တွေရဲ့ ပျံ့နှံ့မှုအားကလည်း...
Fact Checkအောက်တိုဘာ 16, 2020
ဆရာတော် / Project K / ရန်ကင်းတောင်ဆရာတော် (အပေါ်)၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် Project K အဖွဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ Project K အဖွဲ့ကပြဖျော်ဖြေမှုမှာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံရိပ်ကို အသုံးပြုမှုမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေနဲ့...
NLD / NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီက အတွင်းရေးမှူးမုံရွာအောင်ရှင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုအပေါ် သတင်းအမှားတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နေသူတွေကို အရေးမယူဖို့နဲ့ လူထုသိအောင်သာ ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သမ္မတ ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဇော်ဌေးက သတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားထားပါတယ်။ သတင်းအတု၊ သတင်းအမှားတွေဂယက်ကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွေအထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိခဲ့တဲ့...